Maitiro Ekukanzura Disney Plus Kunyorera? - Varaidzo
Maitiro Ekudzima Disney Akaundi Akaundi?
Disney Plus inoratidzira chikuva iyo yave imwe yeiyo inotungamira yekushambadzira sevhisi vanopa. Vane muhombe muunganidzwa wemamuvhi uye TV Series kuti iwe ungade kutarisa. Asi kana iwe uchinzwa kuti sevhisi haisi iyo yawanga uchitsvaga, unogona kuikanzura chero nguva. Kuti udzivise mitero isingadiwe, unofanirwa kuikanzura zuva rekubhadhara risati rapera.
Iwe unogona kukanzura nyore nyore nhengo yako uchishandisa webhu browser yako. Kunyoresa kwako kweDisney Plus kunongogara kusvika kumagumo ezuva rako rekubhadhara izvo zvinoreva kuti uchazokwanisa kutarisa chero chawakabhadhara kunyangwe wabvisa kunyorera.
Kazhinji, kunyoreswa kweDisney Plus parizvino ndeye madhora 6.99 pamwedzi kana nezve $ 69.99 yegore rese. Izvo iwe zvaunogona kuita ndezve, iwe unogona kuzviyedza usati watenga chaizvo iyo nhengo ne yemahara 7 mazuva kutongwa nguva. Naizvozvi, iwe unogona kuona kuburikidza nemuyedzo kana masevhisi ari izvo zvawanga uchitsvaga uye kana zviri kumusoro kwechiratidzo. Ramba uri mupfungwa dzako kuti kana ukaronga kudzima kunyoreswa saka unongofanirwa kudzima nhengo panguva yekutongwa saka hauzobhadhariswa kunyorera.
Nekudaro, kana iwe ukabvisa kunyoreswa kana nguva yekuyedza yapera, kunyorera kwako kuri kuenderera mberi kusvika rinotevera zuva rekubhadhara iro rinoreva kuti richashanda kusvika kupera kwemwedzi kana iwe wakasarudza kuronga kwemwedzi uye zvinogona for kusvika kupera kwegore dai iwe wakasarudza iyo yegore sarudzo. Muzviitiko zvese izvi, uri kuzobhadhariswa madhora 6.99 emwedzi wese kana angangoita $ 69.99 yegore rese zvichienderana nechirongwa chawakasarudza.
Saina kuDisney Plus Mudzidzi Discount
Ungawana Sei Mahara IPTV?
Iwe Unogona Sei Kanzura yako Disney Plus Kunyorera?
Shanyira iyo webhusaiti yepamutemo uye tinya paAccount pasi peProfile.
Paunosvika ipapo, uchafanirwa kubaya Billing Details. Kubva ipapo, iwe uchaona iyo sarudzo yekumisa kunyorera kwako.
Uri kuenda kunotora Yakazara Kanzura sarudzo pachiratidziro iyo zvakare inokuratidza iwe kuti une mazuva mangani kusvika yako yazvino kubhadharisa kutenderera yapera. Uye iwe wapedza ipapo. Chimwe chinyorwa chinobvunza kuti sei wafunga kukanzura kunyorera kwako.
Ndizvo. Wapedza. Iwe zvakare uchawana email inosimbisa kudzima. Kana iwe ukafunga kushandura pfungwa dzako, tinya paKutangazve Kunyorera bhatani mune iyo email kuti utangezve kunyorera kwako zvakare.
Unogona sei kudzima yako yemahara Disney Plus kuyedzwa?
Maitiro acho akafanana. Kana iwe uchizoikanzura usati wasvika zuva rako rekutanga rekubhadhara, uri kuzonakidzwa nekutongwa kwako pasina kubhadhariswa kana sendi rimwe. Iwe uchagamuchira meseji nezve izvi pavanotanga kukukumbira iwe kuti uise yako kiredhiti kadhi ruzivo kuburikidza neDisney Plus.
Zvirongwa zvekuKanzura Disney Plus kunyorera mune ako iPhone magadziriso:
Dai iwe wakasainira kunyoreswa kweDisney Plus uchishandisa yako iPhone kana chero imwe Apple chishandiso. Pakadaro, iwe uchafanirwa kushandisa Apple chishandiso kana iwe uchida kukanzura kunyorera kwako. Asi, izvo zviri nyore kwazvo kuita. Unogona kutevedzera nhanho idzi kukanzura yako Disney Plus kunyorera uchishandisa yako iPhone kana chero imwe Apple Chipenga.
Vhura iyo Zvirongwa app pane yako kifaa.
Dzvanya pazita rako kumusoro.
Sarudza Kunyorera kubva ipapo.
Dzvanya pane Disney Plus.
Kubva ipapo, tinya kukanzura Kunyorera.
Tarira: Zviri nyore kudzima Disney Plus kunyoreswa kubva pawebhusaiti.
Maitiro ekudzima Disney Plus kunyorera muGoogle Play Store pane yako Android foni?
Kana iwe wakanyorera kuDisney Plus uchishandisa Google Play kana Android mudziyo, kudzima kunyoreswa kuri nyore.
Kutanga, iwe unofanirwa kuvhura iyo Google Play Chitoro application pane yako Android chishandiso.
Dzvanya paMenu uye sarudza Kunyorera kubva ipapo.
Sarudza Disney Plus.
Dzvanya pakanzura kunyorera.
Kukanzura account yako yeDisney Plus iri nyore chero bedzi iwe uchiziva kuti iwe unofanirwa kuikanzura uchishandisa mhando imwechete yechigadzirwa iwe wawaimboshandisa kusaina zvakafanana. Naizvozvi, zvinoreva kuti kana iwe waisaina kuDisney Plus uchishandisa webhu bhurawuza kungave paPC yako kana palaptop, unofanirwa kusaina muchigadzirwa chakafanana kuti ubvise kunyorera kwako kweDisney Plus.
Kana uchinge wakanzura kunyorera kwako, iwe uchazokwanisa kuhuwana kusvika iwe wasvika kumagumo ebhiri rekutenderera. Saka kana iwe uri kuronga kukanzura kunyorera kwako, iwe ungangoda kuve nechokwadi chekuzvigona mushure mekutenderera, saka uchine imwe mwedzi yekutarisa. Uye kana iwe ukachinja pfungwa dzako uye uchida kutanga zvakare ipapo unogona kugara uchizvinyoresa zvakare gare gare kuti utarise zvisingaperi nhevedzano.
Pluto TV Dzimwe nzira
Safari ye Windows 10 - Dhawunirodhi Yepamutemo Inowanikwa?
Best Horror Mafirimu Ekutarisa - Usatarise wega
xbox 360 goridhe nhengo yekodhi jenareta
tarisa mafirimu matsva pane putlockers
rakanakira mamaboard eamd ryzen
netflix mhenyu chat isingashande